संस्करण 0.9.2 –4वर्ष र हामी तोड छैन
मार्च 11, 2013 द्वारा Ofer3प्रतिकृयाहरु
हामी वृद्धि4(वास्तवमा 5) हाम्रो वार्षिकोत्सव लागि ट्यूलिप
हो, WordPress लागि Transposh को पहिलो संस्करण जारी थियो देखि यो चार वर्ष थियो. अनि वास्तवमा, हामी एक धेरै लामो बाटो आइसकेका छौं.
Transposh सबै वेब साइटहरु हजारौं प्रयोग भइरहेको छ, र हामी धेरै खुसी प्रयोगकर्ताहरू छ (andafew less happy ones 🙂 ).
यो संस्करण, 0.9.2, हामी अब द्वारा छ अपेक्षा के साँच्चै छैन, चार वर्ष पछि हामी आशा छ भनेर एक संस्करण एक (शायद पनि दुई) पहिले नै जारी गरिएको छ हुनेछ. तर सम्भवतः, तपाईं यो योजना को रूप मा जीवन विरलै बढ्न छ.
यो पोस्ट को शीर्षक वास्तवमा हाम्रो पार्सर को एक नयाँ व्यवहार बुझाउँछ, हामी एक सामना गर्न प्रयोग गर्दा &फीड; (जो एक गैर भाँच्ने अन्तरिक्ष हुनुपर्छ) हामी वास्तव मा दुई मा वाक्यांश भङ्ग, कुरा हुनुपर्दथ्यो के ठीक विपरित बरु छ जो. त्यसैले आषा हो कि यो अब निश्चित छ, र हामी अब पतन गर्नेछु!
अन्य परिवर्तनहरू समावेश:
Woocommerce एकीकरण लागि आधारभूत समर्थन
अन्य प्लगइन वा थिमहरु को process_page अकालमा भनिन्छ गर्ने गराउने, जब मामला अधिलेखन
यही अनुवाद थप एक भन्दा अनुच्छेद मा देखा एक फोहर तय बग
बिंग दुई भाषामा जोडी छ
Translate_on_publish अक्षम थियो जहाँ पोस्ट मा dserber disallowing भाषा चयन द्वारा रिपोर्ट बग Fix
। PO फाइलका लागि अद्यतन, टर्की अनुबाद Ömer Faruk खान
तपाईं यो संस्करण आनन्द हुनेछ! यो एक आदेश छ! 🙂
न्यून दायर: सामान्य संदेश, विज्ञप्ति घोषणा, सफ्टवेयर अपडेट संग Tagged: बिंग (MSN) अनुवादक, जन्मदिन, लघु, पार्सर, जारी